Congressman American: Izimayini kumele zikhokhelwe intela, - Blockchain Izindaba
Omele Democratic Party yase-United States Ro Khanna uhlongoza ukuphoqelela zemayini cryptocurrencies intela.
Omele Democratic Party yase-United States Ro Khanna ukholelwa ukuthi lemayini cryptocurrencies kumele zikhokhelwe intela,. Njengoba izimayini esikhathini esizayo kudala izinkinga ezithile zemvelo, the Congressman uhlongoza isinxephezeliso lokhu umonakalo.
Uma kukhishwa kwekhabhoni kuthiwa intela, ke, kungani ungenzi lokho okufanayo cryptocurrencies yezimayini? Imayini bitcoin nezinye cryptocurrencies zidinga abalulekile amandla izindleko. Iziphathimandla yamazwe amaningi aseqalile sikhathazeke ukwanda ngenani ugesi kudliwe, futhi kwemvelo babikezela enkingeni enkulu. Nakhu american lesiShaya ecabanga ngalokhu:
A intela kungenziwa onikezwe amandla ukusetshenziswa, noma intela ukusebenza amapulazi akhiqiza bitcoins – ngoba kuyayithinta imvelo, kumele akhokhe ngoba.
Ngenjwayelo, the abameli Congressman ukulawula zonke izici ukuhweba cryptocurrency, kuhlanganise ngoba impi asebenzayo ebugebengwini. Khanna futhi ukholelwa ukuthi cryptocurrency ukuthengiselana ibalulekile ukuqapha, ukuze yokulwa nobuphekula.
Blockchain Izindaba 20.07.2018
Thumela Previous:White House olusemthethweni: hhayi eduze Bitcoin isiqondiso
Thumela Landelayo:Yini Iza Landelayo ngokuba Bitcoin Price?
خدمات تخصصی نصب و جابجایی کولر گازی says:
Februwari 18, 2018 ngesikhathi 8:12 AM
Februwari 27, 2018 ngesikhathi 3:51 AM